NEWS COLLECTION: October 2013
တောင်ငူမြို့အနီးရှိ စစ်တောင်းမြစ်အထက်တွင် မြန်မာအစိုးရနှင့် စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများပူးပေါင်း၍ ဒေသဖွံ့ဖြိုး ရေးအတွက် လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်ရည်ရွယ်၍ သောက်ရေခပ်၊ ပေါင်းလောင်း၊ ဆွာချောင်းနှင့် ပတိ စသည့် ဆည်များ တည်ဆောက်ထားလျှက်ရှိသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ်ရေးဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သော တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၏ လိုင်ဇာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲစတင်
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ လိုင်ဇာဆွေးနွေးပွဲကို လိုင်ဇာမြို့တွင် အောက်တိုဘာ ၃၀ က စတင်ခဲ့ပြီး ယင်းဆွေးနွေးပွဲ၌ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဘုံ သဘောတူညီချက်ရရှိရန် ဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များညီလာခံ (Ethnic Armed Organizations Conference) တွင် ပထမနေ့၌ မိတ်ဆက်ခြင်း၊ တစ်ဖွဲ့ချင်းခေါင်းဆောင်များ၏ သဘောထားများ တင်ပြခဲ့ကြသည်ဟုအစည်း အဝေးတက်ရောက်ခဲ့သူ KIO အရပ်ဘက်အရာရှိ ဦးဒွဲပီဆားက ပြောသည်။
KIA ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လက ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ KNU ကိုယ်စား တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး KNU ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မူစေးထူးက KNU ၏ သဘောထားကိုတင်ပြခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
“သူက ကေအိုင်အိုလို မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်စားပြောတယ် ပြဿနာကပင်လုံကနေစ တယ်။ ၆၁၊ ၆၂ ပြောင်းလဲချိန်မှာ တချို့ဖမ်းခံရတယ်။ တချို့လက်နက်ပြန်ကိုင်တယ်။ အခုလည်း ကိုယ် ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမူဆိုပြီး အမျိုးမျိုးလုပ်လာမှာကို စိုးရိမ်ရတယ်ဆိုတာတွေ ပြောသွားတယ်” ဟု ဦးဒွဲပီဆား ကဆိုသည်။
KIO ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇောင်းခရားက နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနိုင်ရန် စတင်လိုက်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ် နိုင်ရန် ညီလာခံကျင်းပရခြင်းဖြစ်ကြောင်း တိုင်းရင်းသားများ၏လိုလားချက်များနှင့် အမြင်သဘောထား များကို စုစည်း၍ဘုံသဘောတူညီချက်ချမှတ်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း သဘာပတိမိန့်ခွန်းတွင် ပြော ဆိုခဲ့သည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် UNFC အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော KNU, KNPP, SSPP, SSA, NMSP, WNO, PSLF/ TNLA, PNLO, CNF, ALP များနှင့် အခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဖြစ်သော DKBA, RCSS/ SSA အဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင်များစုစုပေါင်း ၁၀၀ ကျော် တက်ရောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ သဘောတူညီချက်များနှင့်ရှေ့တွင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ခြင်းသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း ငြိမ်း ချမ်းရေး ပြန်လည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပစ်အခတ်ရပ်စဲခြင်း သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန်၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု မူဘောင်ချမှတ်နိုင်ရန် နှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဖြင့် ငြိမ်းချမ်း ရေးတည်ဆောက်ရန်တို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်ဟုလည်း နိုင်ငံတော် သမ္မတက သ၀ဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့သည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ ညီလာခံကို အောက်တိုဘာ ၃၀ မှ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်အထိ ကေအိုင်အိုဌာနချုပ် လိုင်ဇာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။
လိုင်ဇာတွင် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေးနေချိန်မှာပဲ မန်စီမြို့နယ် ကောင်ဂျာကျေးရွာအနီး KIA တပ်မဟာ ၃ လက်အောက်ခံတပ်ရင်း ၁၂ နှင့် အစိုးရစစ်တပ်ဖွဲ့တို့ယနေ့ ည နေ ၄ နာရီခွဲမှစတင်၍ (မဇ္ဈိမက ဖုန်းခေါ် ဆိုချိန် ၅ နာရီအထိ) တိုက်ပွဲ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု တပ်ရင်း ၁၂တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးဂျွန်းအောင်က ပြောသည်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ဖရင့်အား ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဌာန ချုပ် လိုင်ဇာမြို့တွင် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ သုံးရက်ကြာကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
“ကျနော်တို့ ကွန်ဖရင့်ကျင်းပရေးကော်မတီ အရင်ဖွဲ့တယ်။ အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ယောက်ပါတယ်။ ကော်မတီခေါင်းဆောင် က ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂမ်ရှောင်ပေါ့။ ဒု ခေါင်းဆောင်က ပဒိုကွယ်ထူးဝင်း၊ နိုင်ဟံသာက အတွင်းရေးမှူးဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းလက တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးပါ” - ဟု တက်ရောက်သူတဦးက ပြောပါသည်။
အများသဘောတူညီချက်အရ လိုင်ဇာမြို့၌ ယနေ့ စတင်သော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များထိပ်သီး ခေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးအား ‘တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ကွန်ဖရင့်’ ဟု သတ်မှတ်ကြောင်းကြားသိရပါသည်။
ကွန်ဖရင့်ကျင်းပရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ သတင်း၊ ဓါတ်ပုံ အချက်အလက်များ ကော်မတီခွင့်ပြုချက်မရဘဲပြင်ပ သို့ပေးပို့ခြင်း၊ ထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုရဟု ပါရှိသောကြောင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ အခြား အချက်အလက်များ ပြော ပြရန် အချိန်စောသေးကြောင်း တက်ရောက်သူတဦးက ပြောပါသည်။
နိုဝင်ဘာပထမပတ်အတွင်း တတိုင်းပြည်လုံးအပစ်ရပ်ရန် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ပြင်ထားသောကြောင့်ကြိုတင်ပြင် ဆင်သည့်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ထိပ်သီးများ လိုင်ဇာ၌ တွေ့ဆုံခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ လိုင်ဇာကွန်ဖရင့်တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ၁၈ ဖွဲ့ မှ ခေါင်းဆောင် များ၊ ကိုယ်စားလှယ်တော်များ ၆၀ ကျော်တက်ရောက်ပါသည်။
သို့သော်လည်း အင်အားအတောင့်တင်းဆုံးဖြစ်သည့် ၀ ပြည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA နှင့် မိုင်း လား တပ်ဖွဲ့တို့ကမူ တက်ရောက်ခြင်းမပြုပေ။
ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) ဒုတိယ ဥက္ကဌဟောင်း ဒေါက်တာ မနန်တူးဂျာ ဦးဆောင်သည့် ကချင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီ ပါတီ (KSDP) ကို အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်စွဲဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ပါတီတည်ထောင်ခွင့် ပြုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီ ပါတီ၏ မူဝါဒများမှာ မိမိဒေသ မိမိပြည်နယ်၏ အကျိုး နှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ဆောင်ရွက်ရန်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ပပျောက်ရန်၊ ပညာရေး မြင့်မားလာစေရန်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ ကချင်ပြည်နယ်၊ လိုင်ဇာမြို့တွင် ကျင်းပနေသည့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ ညီလာခံက အားလုံးအတွက် အရေးကြီးသည့် အချိန်ဖြစ်နေကြောင်း၊ အနာဂတ်အတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေသောကြောင့် ကောင်းသောဘက်သို့ ဦးတည်နေကြောင်း၊ တူညီသော သဘောထားရလဒ်များလည်း ယင်းနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ စားပွဲဝိုင်းတွင် ရရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ဒေါက်တာ တူးဂျာက ဆက်ပြောသည်။
အောက်တိုဘာ ၃၀ တွင် လိုင်ဇာမြို့၌ကျင်းပသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အစည်းအဝေးသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်က အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်စွဲဖြင့် သ၀ဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ သ၀ဏ်လွှာတွင်အစည်းအဝေးမှ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ သဘောတူညီချက် များနှင့် ရှေ့တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ခြင်းသည် နိုင်ငံအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပစ်အခတ်ရပ်စဲခြင်း သဘောတူညီချက် လက် မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန်၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု မူဘောင်ချမှတ်နိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရန်တို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်းပါဝင်သည်။
၎င်းအပြင် ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်မှု မပြိုကွဲရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့အတွက် နိုင်ငံအတွင်းမှီတင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားအားလုံးက စည်းလုံးညီ ညွတ်စွာဖြင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်မှသာအောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည် ကြောင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းရေးသားထားသည်။
ယင်းသို့ သ၀ဏ်လွှာပေးပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဇော်ဌေးက “သမ္မတကြီး ပြောတာပြည့်စုံပါတယ်၏ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း ဒီအတိုင်းမျှော်လင့်ပါတယ်”ဟု မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ၏ ဌာနချုပ်ဖြစ်သောလိုင်ဇာတွင် ယင်းကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းသည် ပထမအကြိမ်ကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်း အစည်းအဝေးသည် အစိုးရ နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ် မထိုးမီတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ အားလုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် KIO က ကမကထလုပ် ကာဆွေးနွေးမည့်ဆွေးနွေးပွဲလည်း ဖြစ်သည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲကို အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုး များဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ၊မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ တပ်မတော် (SSPP/SSA)၊ ပလောင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး၊ ကရင်နီ အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်း အရုံး၊ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင့်တပ်မတော် (DKBA)၊ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတပ်မတော် (RCSS/SSA)၊ ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF)၊ ပအိုဝ်း အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (PNLO)၊ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (KNLA/PC) စသောတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ တက်ရောက်လျက်ရှိသည်။
လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်နှင့် ၅ ရက်တွင် ကျင်းပမည့် အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များ တွေ့ဆုံပွဲကို UNFC အနေဖြင့် တက်ရောက် ဆွေးနွေးရန် ရှိ၊ မရှိကို ဧရာဝတီက မေးမြန်းရာ ပြောကြားရန် စောသေးကြောင်း၊ လိုင်ဇာ ဆွေးနွေးပွဲ နောက်ဆုံးရက်မှသာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ဖြေကြားသည်။
UWSA နှင့် NDAA တို့က ကျန်းမာရေး မကောင်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးမည့် အကြောင်းအရာမှာ မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖြစ်သဖြင့် နားမလည်ခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု အကြောင်းကြားကြောင်း သိရသည်။
၀န်ကြီးဌာနရုံးဟောင်းများ၏ တင်ဒါရွေးချယ်မှု ပြီးစီးသွားသော်လည်း မူလပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား ရှာဖွေနေမှုကြောင့် ထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဟုဆို
နှစ် ၁၀၀ ကျော်သက်တမ်းရှိ ၀န်ကြီးဌာနရုံးဟောင်း အဆောက်အအုံလေးခုအား ဟိုတယ်အဖြစ် အသွင် ပြောင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါရွေးချယ်မှုပြီးစီးပြီဖြစ်သော်လည်း မူလပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားများ ပြန်လည်ရှာဖွေနေရကြောင်း မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်နိုင်ဦးက မဇ္ဈိမသို့ ထုတ်ဖော်ပြောသည်။
သွင်းကုန် ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းရုံးဟောင်း၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းရုံးဟောင်း၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနရုံးဟောင်းနှင့် ကုန်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း အမှတ်(၅) ရုံးဟောင်း စသောဝန်ကြီးဌာနရုံးဟောင်း လေးခုစလုံးအတွက် တင်ဒါတင်သွင်းထားသူများအား စိစစ်ရွေးချယ်မှု နောက်ဆုံးအဆင့်အထိ အဆုံးသတ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သော်လည်း ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထား များကို သေချာစေရန် စိစစ်နေရသဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည့် ကုမ္ပဏီများအား ထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ဖြစ်နေကြောင်း ယင်းကဆိုသည်။
ဦးအောင်နိုင်ဦးက “တင်ဒါရွေးချယ် စိစစ်တာတွေက အားလုံးပြီးသွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားတွေကို သေသေချာချာ လေ့လာစိစစ်ပြီး ခိုင်လုံမှုရှိမှ ဆက်လုပ်ပါဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ၀န်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားမှုရှိလာတဲ့အတွက် အထောက်အထားတွေကို ပြန်လည်ရှာဖွေနေပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထောက်အထားဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ အားနည်းချက်ရှိခဲ့သည့်အပြင် အစိုးရအပြောင်းအလဲများကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားများရှာဖွေရန် အခက်အခဲများရှိနိုင် ကြောင်း တင်ဒါဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သောကုမ္ပဏီများတွင် ပါဝင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံလယ်ယာစီးပွားရေး အများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်း (MAPCO) မှ မန်နေဂျာ ဦးရဲမင်းအောင်က ပြောသည်။
ဦးရဲမင်းအောင်က “ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ မှတ်တမ်းတွေက အားနည်းခဲ့တော့ အစရှာရတာခက်ခဲမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်ရမှာပဲလေ။ တင်ဒါဆိုတာကလည်း စပြီးခေါ်ကတည်းက အခြေအနေတစ်ခုခုဖြစ် လာရင် လုပ်ပိုင်ခွင့်မပေးဘဲ ရပ်ထားလို့လည်းရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် လက်ခံရ မှာပဲ”ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အဆိုပါအဆောက်အအုံများအား လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများကိုမူ ရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားများ ရှာဖွေမှုပြီးဆုံးချိန်မှသာ ထုတ်ပြန်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်နိုင်ဦးက ပြောသည်။
ဦးအောင်နိုင်ဦးက “ဒီရုံးတွေက နိုင်ငံနဲ့ချီပြီး သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေဆိုတော့ ပိုပြီးသေချာအောင် စိစစ် နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်တော့မှ စိစစ်မှုပြီးမယ်ဆိုတာ ကြိုပြောရတာ နည်းနည်းတော့ခက်တယ်။ စိစစ်မှုပြီးရင်တော့ ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာပါ”ဟု ပြောသည်။
ရဲတပ်ရင်း ချရန် မြေသိမ်းမည်ဆို၍ ကျောက်ဖြူ ဒေသခံများ စိုးရိမ်
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အုန်းတော ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် အခြေစိုက်မည့် ရဲတပ်ရင်း တစ်ခုအတွက် လယ်မြေဧက ၂၀၀ ခန့်ကို သိမ်းယူမည်ဟု သတင်းထွက်နေသဖြင့် ကျေးရွာသားများ အကြား စိုးရိမ်မူများ အထူး တိုးပွားနေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ထိုသို့ မြေသိမ်းယူမည်ကို ပြည်နယ်၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ် အဆင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ယခုအချိန်ထိ တစ်စုံတစ်ရာ ကျေးရွာသားများသို့ ချပြ ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးကြောင်း၊ တိတ်တဆိတ် သိမ်းယူရန် စီစဉ်နေပုံရကြောင်း ဒေသခံ တစ်ဦးက နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။
၎င်းမြေများကို ရဲတပ်ရင်းချရန် အတွက် ကျောက်ဖြူ မြေစာရင်း ဦးစီးဌာမှ များမကြာမှီက လာရောက် တိုင်းတာ သွားခဲ့သည်ဟု ၎င်းဒေသခံက ပြောသည်။
“ မြေစာရင်းဌာနက တိုင်းတာမူုတွေ ပြီးစီးသွားပါပြီ။ ကျောက်ဖြူ မြို့နယ် အုန်းတော ကျေးအုပ်စုက ၀က်ဆံကျေးရွာနဲ့ ပြိုင်းစေ့ကေ ကျေးရွာ အကြားက ကွင်းအမှတ် ၄၆၀ မှာ ရဲတပ်ရင်းကို ချမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမြေတွေကို သိမ်းမယ်လို့ သိရပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဒေသခံ ပြည်သူများပိုင် လယ်မြေပေါ်တွင် အာဏာပိုင်များမှ ရဲတပ်ရင်း တစ်ခု တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်နေသဖြင့် လုပ်ကိုင် စားသောက်နေသော စိုက်ပျိုးမြေများ ဆုံးရှုံးမည်ကို ဒေသခံများ အထူး စိုးရိမ်နေကြသည်ဟု ဆိုသည်။
“ ဒီမြေတွေပေါ်မှာ ရဲတပ်ရင်းအတွက် အဆောင်တွေ ဆောက်မယ်ဆိုတာကို ခုအချိန်ထိ ဘယ်အာဏာပိုင်ကမှ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုတာ မရှိသေးဘူး။ ခုလို လူထုကို အသိမပေးဘဲ ဆောင်ရွက်တဲ့ အတွက် ကျနော်တို့ ဒေသက လူတွေကတော့ တစ်စုံတစ်ရာ လျှော်ကြေး မပေးဘဲ သိမ်းနိုင်တယ်လို့ ယူဆနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတိုင်းက စိုးရိမ်နေကြပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အမည် မဖေါ်လိုသူ ဒေသခံ မြေစာရင်းဌာနမှ စာရေး တစ်ဦးကလည်း ကွင်းအမှတ် ၄၆၀ တွင် ရဲတပ်ရင်းချမည်ကို အတည်ပြု ပြောကြားသည်ဟု သိရသည်။
ယခုအခါ ဒေသခံများ အနေဖြင့် အဆိုပါ ရဲတပ်ရင်းချမည့် ကိစ္စကြောင့် အုန်းတောကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ကျွန်းလုံးဆိုင်ရာ (ဒေသဆိုင်ရာ) အစည်းအဝေးတစ်ခုကို များမကြာမီ ကျင်းပသွားမည် ဟု သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့တွင် ဓည၀တီ ရေတပ် စခန်း တည်ဆောက်စဉ်ကလည်း လယ်မြေအများ အသိမ်းခံခဲ့ရသလို အခြား အမှတ် ၅၄၂ နှင့် အမှတ် ၅၄၃ စစ်တပ် တပ်ရင်း (၂) ခုအတွက်လည်း လယ်မြေ အများအပြားကိုလည်း သိမ်းယူသွားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ယင်းပြင် ရွှေသဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်း အတွက်လည်း ဒေသခံများ အနေဖြင့် လယ်မြေများ ထောင်ချီ၍ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဒေသခံများ လုပ်ကိုင် စားသောက်နေသော မြေများကို သိမ်းချင်တိုင်း သိမ်းနေကြမည်ဆိုလျှင် ဒေသခံများမှာ လုပ်ကိုင် စားသောက်စရာ မြေကျန်တော့မည် မဟုတ်သဖြင့် မိမိတို့၏ ချက်မြုပ်မြေကို စွန့်ခွာ ထွက်သွားကြရန်သာ ရှိပါတော့ကြောင်း ကျောက်ဖြူမြို့မှ လူမူရေး လူပ်ရှား ဆောင်ရွက်နေသူ ဦးသန္တာမောင်က ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ် ကြိမ်ချောင်းဈေး မီးလောင်သဖြင့် ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးခန့် မီးထဲပါသွားသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက် ယမန်နေ့ ညဉ့် ၁၂ နာရီမှ စတင်လောင်ကျွမ်းခြင်း ဖြစ်ပြီး နံနက် ၄ နာရီမှ မီးငြိမ်းသွားသည်ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ စရဖ အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ညဉ့်အချိန် လူများ အိပ်ပျော်နေချိန်တွင် လောင်ကျွမ်းခြင်း ဖြစ်သဖြင့် မီးလောင်ကျွမ်းမူ ပမာဏများပြားကြောင်း၊ ယင်းပြင် ကြိမ်ချောင်းတွင် မီးသတ်ကားလည်း မရှိသဖြင့် မီးကို အချိန်တိုကာလ အတွင်း မငြိမ်းသတ်နိုင်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
မောင်တော မီးသတ်ဌာနမှ လိုက်ပါသွားသော်လည်း မီးငြိမ်းပြီးမှ ရောက်ရှိသွားသည်ဟု မီးသတ်ဦးစီးဌာနနှင့် နီးစပ်သူ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ဒုတိယ အကြိမ် ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ် ကုန်သည်များ တွေ့ဆုံ
နှစ်နိုင်ငံ ရောင်းကုန် ပစ္စည်းများ ခင်းကျင်းမှု နှင့်အတူ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု နှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်မှု ကို တိုးမြှင့် လာစေရန် ရည်ရွယ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံ တာပ်ခရိုင် ကုန်သည် ကြီးများ အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ မှ မွန်ပြည်နယ် နှင့် ကရင်ပြည်နယ် ကုန်သည်ကြီးများ အား ဒုတိယ အကြိမ် Business Matching အဖြစ် ယမာန်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက် မြို့၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။
“ဤအစီ အစဉ်ကို ဆောင်ရွက် ခဲ့တာက နှစ်ဖက် လုပ်ငန်းရှင်တွေ တစ်စု တစ်စည်းတည်း တစ်နေရာ တည်းမှာ တွေ့ပြီး တနေရာ တည်းမှာ လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်လို့ ရအောင် ရင်နှီး မြှုပ်နှံမှု ကုန်သွယ် ရောင်းဝယ် နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်တယ်” ဟု ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် စီစဉ် ဆောင်ရွက်သူ သိရိဟံသာ ကုမ္ပဏီမှ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဦး နေဇော်အောင်မှ ဆိုခဲ့သည်။
ယင်း တွေ့ဆုံပွဲသို့ တာပ်ခရိုင် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့ကို တာပ်ခရိုင် ဥက္ကဌမှ ဦးဆောင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ သိရိဟံသာ ကုမ္ပဏီ ဦးဆောင်သော ကုန်သည်ကြီး (၂၀) ဦးခန့် တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ ကုန်သည် အသင်းမှ ခင်းကျင်း ထားသော ရောင်းကုန် ပစ္စည်းများ အနက်မှ စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန် ပစ္စည်းများ၊ ရေထွက် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ သတ္တုတွင်း ထွက်ကုန် ပစ္စည်း များကို ထိုင်းကုန်သည် များက အဓိက ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာဖက်ကမူ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ၊ သားရေထည် ပစ္စည်း၊ စားသောက်ကုန် ပစ္စည်းများ၊ အိမ်သုံး ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး၊ အလှကုန် ပစ္စည်းများကို အဓိက ဝယ်ယူ ခဲ့ကြောင်း တာခ်ခရိုင် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့မှ အတွင်းရေးမှူး မစ္စစ် စကောင်းဇုဆိုင်းချေ့ မှ ပြောသည်။
ဤ ဒုတိယအကြိမ် တွေ့ဆုံ မှုတွင် ဘတ်ငွေ သန်းပေါင်း (၆၀) ခန့် ရောင်းဝယ် နိုင်ခဲ့ကြပြီး ပထမ အကြိမ် တွေ့ဆုံမှုတွင် ဘတ်ငွေ သန်းပေါင်း (၅၀) ခန့်ရောင်းဝယ် နိုင် ခဲ့ကြသဖြင့် တိုးတက်မှု ရှိလာသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ထိုင်းကုန်ပစ္စည်း များသည် မြန်မာ့ ဈေးကွက်နှင့် ရင်းနှီး ပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အရည်အသွေး မြင့်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများ ပိုမိုထုတ်လုပ် ကုန်သွယ် နိုင်မှုသည် ထိုင်းမြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ၏ အနာဂတ် ကုန်သွယ်မှု ကို ပိုမိုခိုင်မာ အားကောင်းလာ စေမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ပွဲတွင် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တက်ရောက် ခဲ့သည့် တာခ်ခရိုင်ဝန် မစ္စတာ ဆူရိယ ပရာ ဇာတ်ဗာန်ဒိတ်စ် မှ ပြောကြား သွားခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှု လုပ်ငန်းရှင်များ ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆေးရုံ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား လာရေး၊ ရေထွက်ပစ္စည်း ထုတ် လုပ်ရေး လုပ်ငန်း တို့၌လည်း ရင်းနှီး မြုပ်နှံရန် အခြေအနေ ကောင်းများ ရှိနေသည် ဟုဆိုပါသည်။
ဤကဲ့သို့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု နှင့် ရောင်းဝယ် ဖေါက်ကားမှု အပြင် မဲဆောက်မြို့ရှိ အိမ်မိုး သွပ်ပြား ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံသို့ လည်းကောင်း ကြံရည်မှ ဇီဝ လောင်စာ ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ (Mae Sot Clean Energy Co.Ltd) သို့ လည်းကောင်း မြန်မာ ကုန်သည်များကို လှည့်လည် ပြသခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဆဋ္ဌမမြောက် ကုန်သွယ်ဖက် နိုင်ငံ ဖြစ်သလို လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် နှစ်နိုင်ငံ ကုန် သွယ်မှုအား ၃ ဆအထိ ဖြစ်သည့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆.၁ ဘီလျံထိ တိုးမြှင့် ကုန်သွယ် နိုင်ရေးကို သဘောတူ ထားခဲ့ကြ ပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဂျူလိုင်လ ထုတ်ပြန်သည့် တရားဝင် စာရင်း ဇယားအရ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၂ သန်း ကုန်သွယ်ခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ မှ မြန်မာနိုင်ငံ အား အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၇၃ သန်းကုန်သွယ် ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြ ထားပါ သည်။
ပဲခူးတိုင်း ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့ခြောက်မြို့နယ်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး၊ ပြန်လည်ရေးဆွဲ ရေးအတွက် လူထုဆန္ဒရယူပွဲလုပ်ခဲ့ရာ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်း ပြင်ဆင်ရန် ထောက်ခံခဲ့ကြပြီး သုံးရာခိုင်နှုန်းက အသစ်ပြန်ရေးဆွဲရန် ဆန္ဒပြုခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ အခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ လူထုဆန္ဒရယူပွဲကို ပြည်မြို့ကမ်းနားလမ်းရှိ ဂင်္ဂါဝတီခန်းမတွင် အောက်တိုဘာလ ၃၀ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယင်းအခမ်းအနားသို့ ရှေ့နေကြီး ဦးကိုနီတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် တိုင်းပြည်အတွက် မည်မျှအရေးကြီးသည်တို့ကို ရှင်းလင်းဟောပြောခဲ့သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယင်းသို့ကောက်ခံခြင်းကို အောက်တိုဘာလကုန်ခန့်တွင် အပြီးကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလတွင်အဖွဲ့ဝင် ၁၀၉ဦး ပါဝင်သော လွှတ်တော်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပူးပေါင်းလေ့လာရေးကော်မတီသို့ ဆက်လက်တင်ပြ သွားမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၃၆ တွင် ဖွဲ့စည်းပုံရှိ အခန်းအချို့မှ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ပြင်ဆင်လိုလျှင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ပြင်ဆင်ရန် သဘောတူလက်ခံပြီးနောက် ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပ၍ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံး၏ ထက် ၀က်ကျော် ဆန္ဒမဲဖြင့်သာပြင်ဆင်ရမည် ဖြစ်သည်။
ပြည်မြို့နယ် ဇီးအုပ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်နေအိမ် ၈၄လုံးနှင့် လယ်ဧကတစ်ထောင်ကျော်ရေမြုပ်
ပဲခူးတိုင်း၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပြည်မြို့နယ် ဇီးအုပ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် မိုးရွာသွန်းချိန် “မတောင့်တ” ရေအရင်းမြစ် ဆည်မှ ရေထွက်ပေါက်အားနည်းသဖြင့် မတောင့်တကျေးရွာမှ နေအိမ် ၈၄လုံးနှင့် လယ်ဧကတစ်ထောင် ကျော်ရေမြုပ်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံရွာသားများက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
အောက်တိုဘာလ၂၉ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီမှစကာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဇီးအုပ်ကျေးရွာအုပ်စု မတောင့်တကျေးရွာမှ နေအိမ် ၈၄လုံး၊ ကျေးရွာအနီးရှိ ဇီးအုပ်ကွင်း၊ နတ်တလင်းကွင်းမှ လယ်မြေဧက တစ်ထောင်ကျော်နှင့် စာ သင်ကျောင်းတစ်ကျောင်း ရေမြုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ရေတံခါး ရေအကုန်မဖွင့်ဘူး။ ရေတံခါးမှာ ဒိုက်တွေကပ်နေတယ်။ ဆည်နဲ့ ရေပိတ်ထားသလိုဖြစ်နေ တယ်။ ဒီဆည်က ရေသောက်ရတာလည်း မရှိဘူး။ ဆည်ရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်က ချောင်းတစ်ဝက်သာ သာလောက် ဖြစ်နေတယ်”ဟု မတောင့်တကျေးရွာမှ မငယ်ငယ်ဆန်းက ပြောသည်။
နေအိမ်၊ စာသင်ကျောင်းနှင့် လယ်မြေများ အမြင့်ပေငါးပေခန့်အထိ ရေနစ်မြုပ်ခြင်းကြောင့် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်တွင် ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းကို ပိတ်ထားရသည်။
လယ်မြေဧက တစ်ထောင်ကျော်အနက် မတောင့်တရေအရင်းအမြစ်ဆည်၏အရှေ့ဘက်ရှိ လယ်ဧက ငါးဆယ်ကျော်သည် ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်သည်ဟု မငယ်ငယ်ဆန်း ကပြောသည်။
“ပျက်မှာ သေချာတယ်။ အခုနေ မသိသေးဘူး။ တော်ကြာနုန်းခြောက်ကပ်ပြီး ပုပ်သွားမှာ”ဟု ၎င်းကဆို သည်။ ထို့အပြင် ကျန်းမာရေးမကောင်းသည့် သူမ၏မိခင်ကို တစ်ခြားရွာသို့ခေတ္တပြောင်းရွှေ့ထားရသည် ဟုဆိုသည်။
ဆည်မှ ရေထွက်ပေါက်အားနည်းသောကြောင့် ရေကြီးခြင်းဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာသို့ စာတင်ထားကြောင်း ဇီးအုပ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဝင်းနိုင်က ပြောသည်။
“လယ်ကြား မြောင်းထပ်တူးပေးဖို့ တင်ထားတယ်။ ရေထုတ်နိုင်အောင်ပြွန်လုပ်ပေးဖို့ လိုမယ်။ ရေထွက် ပေါက်က သုံးပေလောက်ပဲရှိတော့ ရေမထွက်နိုင်ဘူး”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ကျေးရွာ၌ သောက်ရေ၊ သုံးရေများ လိုအပ်နေသည်ဟုလည်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
အဆိုပါဆည်ကို ၁၉၉၀ခုနှစ်ခန့်က ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကလည်း ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လယ်ဧက ၁၃၀၀ကျော် ပျက်စီးခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသတေ့ာင်မြို့နယ်သို့ ၀င်ရောက် ဆိုက်ကပ်လာသော လူမှောင်ခို စက်လှေမှ ထွက်ပြေး ပုန်းရှောင်နေသူများကို နယ်မြေခံ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ လိုက်လံ ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးနေရာ ယမန်နေ့ (အောက်တိုဘာလ ၂၉) ရက်နေ့ထိ ဖမ်းဆီးမိသူ အရေအတွက်မှာ ၃၆ ဦး ရှိသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
၎င်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူများကို ရသေ့တောင်နှင့် မောင်တောမြို့နယ် အတွင်း နယ်မြေခံ စစ်တပ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက လိုက်လံ ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးနေကြောင်း မောင်တော ခရိုင်ရဲမှူးကြီး ဦးရွှေသန်းက ပြောကြားသည်။
“ သူတို့ ထွက်ပြေးသွားနိုင်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ နေရာတွေကို ရဲနဲ့ နယ်မြေခံ တပ်ဖွဲ့တွေက လိုက်လံ ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးမူတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။ မနေ့က ညနေပိုင်းထိ ဖမ်းဆီးမိသူ အရေအတွက်က ၃၆ ဦး ရှိသွားပါပြီ” ဟု ယင်းက ဆိုသည်။ လွန်ခဲ့သော တနင်္ဂနွေနေ့က လူပေါင်း ၁၈၀ ခန့်ကို တင်ဆောင်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံသို့ တရားမ၀င် ထွက်ခွာလာသော မော်တော်ဘုတ် တစ်စီးသည် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ အထွက်တွင် ရာသီ ဥတုဆိုးရွားပြီး မော်တော်ဘုတ် ၀မ်းဗိုက်ထဲ ရေများ ၀င်လာသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက် နယ်စပ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် ချိန်ခါလီ ကျေးရွာ ပင်လယ်ပြင် ကမ်းစပ်သို့ အတင်းထိုးတင်ခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
ထိုသို့ ၀င်ရောက် ဆိုက်ကပ်လာသည်ကို ချိန်ခါလီ ကျေးရွာရှိ နယ်မြေခံ စစ်တပ်က သတင်းရသွားပြီး လိုက်လံ ဖမ်းဆီးရာ ပထမနေ့တွင် လူပေါင်း ၁၈ ဦးကို ဖမ်းမိခဲ့သည်။ ကျန်သူများမှာ အနီးရှိ မေယူတောင်ထဲသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ တပ်ဖွဲ့တွေက လိုက်ရှာနေပါတယ်။ မောင်တောမြို့နယ် အတွင်းမှာရော၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ် အတွင်းမှာရော ဖြစ်ပါတယ်။ မေယူတောင်က တောနက်ပြီး မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်ထိ သွားလာလို့ ရတယ်ဆိုတော့ ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးရတာမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိနေပါတယ်။ ပီးရင် သူတို့က လမ်းလည်း ကျွမ်းပုံရပါတယ်” ဟု ရသေ့တောင်ရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခု မလေးရှားသို့ လူမှောင်ခိုတင်ပို့သည့် စက်လှေတွင် ပါလာသူများ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ မောင်တောမြို့နယ်မှ ဘင်္ဂလီလူမျိုးများ ဖြစ်ကြကြောင်း၊ ထိုအထဲတွင် အမျိုးသမီးလည်း (၅) ဦးပါဝင်သည်ဟု သတင်းရရှိကြောင်း ၎င်းရဲအရာရှိက ပြောဆိုသည်။
ရသေ့တောင်မြို့နယ် အတွင်းမှ ဖမ်းဆီးရမိသူများကိုလည်း ယခုအခါ မောင်တော ရဲစခန်းသို့ လွှဲပြောင်း ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းရဲအရာရှိက ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။ ယခုအခါ ဖမ်းဆီးမိသူ ၃၆ ဦးကို မောင်တောရဲစခန်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းမူများ စတင်ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA တပ်မဟာ (၃) တပ်ရင်း (၁၂) ဒေသသို့ အစိုးရစစ်တပ် စကခ -၂၁ အောက် နည်းဗျူဟာ (၃) မှ စစ်အင်အား ၁၀၀ ကျော်ရိက္ခာနှင့် မြင်းအကောင် ၅၀ ကျော်ဖြင့် စစ်ကူလာသောစစ်ကြောင်းနှင့် ဆဂနမ်ခွမ် (Saga Nam Hkum) သွားလမ်း အောင်နန် (Awng Nan) ရွာဟောင်းလမ်း တလျှောက်တွင် ယမန်နေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့မှ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ တည်ဆောက်မည့် အစိုးရ၏ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့သုံး လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ အစီအစဉ်အား လွှတ်တော်တွင် ကန့်ကွက်မူကြောင့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက သူရ ဦးရွှေမန်းမှ ဆိုင်းငံ့သော်လည်း ယခုနှစ် အကုန်တွင် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေး စက်ရုံတစ်ခုကို ကျောက်ဖြူမြို့တွင် တည်ဆောက် သွားမည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။ -
“မိုင်းခေါင်ကနေ ဘယ်ကိုမှ သွားလို့မရသလို အိမ်ထဲကနေ အပြင်ထွက်ရင်တောင် စစ်တပ်က အမေးအမြန်း ရှိတာကြောင့် ဒေသခံတွေ မထွက်ရဲဘူး။ ကျမတို့ ရွာကတော့ မြန်မာအစိုးရတပ် အခြေချတာရှိတော့ တိုက်ပွဲတော့ မရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်မှ သွားလို့မရတာ ခက်တယ်” ဟု မိုင်းခေါင် ကျေးရွာမှ ဒေသခံ အမျိုးသမီးတဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အမျိုးသမီးတွေ အမှီအခို ကင်းပစေဖို့
မိန်းမတယောက်အဖြစ် မွေးဖွားလာရတာတဲ့ အတွက် ကျမအမြဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အားနွဲ့သူလိုပဲ ခေါ်ခေါ်၊ ဒုတိယလိင် (Second Sex) လိ်ု့ပဲ ခေါ်ခေါ် ဒီအသုံးအနှုန်းဟာ အမျိုးသမီးတွေကို ခွဲခြားသတ်မှတ်တဲ့ အသုံးအနှုန်းလို့ ခံစားမိပါတယ်။ သေချာတာက ဒီကနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ ပိုပြီးအရေးပါလာနေသလို တန်းတူအခွင့်အရေး (Equal Right) ရရှိဖို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလည်း အများကြီးရှိနေတုန်းပဲ ဆိုတာပါ။
အမျိုးသားပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အမျိုးသမီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတယောက် ဖြစ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။
မိန်းမတွေရဲ့တန်ဖိုးကို နားမလည်သူ၊ အလေးမထားသူတွေဟာ မိန်းမတွေကို သားဖောက်စက်လို သဘောထားနေတာ၊ လိင်ကျွန်လို သဘောထားနေတာကို စိတ်မကောင်းစရာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ လူကုန်ကူး ခံနေရမှုတွေမှာလည်း ဆင်းရဲ နွမ်းပါးတဲ့၊ ပညာမတတ်တဲ့ မိန်းမတွေဟာ ၀ိသမ လောဘသားတွေရဲ့ သားကောင် ဖြစ်နေပုံရပါတယ်။
အသိအမှတ် ပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသိအမှတ် မပြုတာဘဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီးတွေ ထဲမှာ ထက်မြက်တဲ့၊ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ မြင့်မားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရှိနေတာကို ငြင်းလို့ရမယ်မထင်ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ ထဲကဆိုရင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဟောင်း ဟီလာရီကလင်တန်၊ ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မာဂရက်သက်ချာ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် (အဓိပတိ) အင်ဂျလာ မက်ကယ်တို့ဟာ အထူးထင်ရှားသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒိန်းမတ်၊ တောင်အာဖရိက၊ ထိုင်ဝမ်၊ တရုတ်၊ အမေရိကန်၊ နီပေါ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ကနေဒါ၊ အိန္ဒိယ၊ ဗင်နီဇွဲလား၊ အီရန်၊ အိုင်ယာလန်၊ ပါကစ္စတန်၊ ပိုလန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဥရုဂွေး၊ အီဂျစ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယမ်၊ ဘော့စ်ဝါနာ၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ယူဂန်ဒါ၊ ဂရိ၊ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ သြစတြေးလျ … စတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်း အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အရေးပါမှု ပိုမြင့်မားလာတာကို သက်သေပြနေပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် ဆာခါရော့ဗ် လူ့အခွင့်အရေးဆု ချီးမြှင့်ခံရတဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသူလေး မာလာလာ ယူဆွဇ်ဇိုင်ဟာ အသက် ၁၆ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ပါကစ္စတန် အနောက်မြောက်ပိုင်း တာလီဘန်တွေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ဆွတ်တောင်ကြားက မင်ဂိုရာမြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ မ်ိန်းမပျိုလေးဟာ ပညာရေးရဲ့ အရေးကြီးပုံကို ကောင်ကောင်းကြီး နားလည် သဘောပေါက် ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဒေသမှာ မိန်းကလေးတွေ ပညာသင်ကြားခွင့် ရဖို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့လို့ မာလာလာကို တာလီဘန် သေနတ်သမားတွေက ပစ်ခတ် လုပ်ကြံခဲ့ပေမယ့် အသက်မသေခဲ့ပါဘူး။ ဥရောပတိုက်ရဲ့ အကြီးဆုံး စာကြည့်တိုက်လို့ ပြောနိုင်တဲ့ “ဘာမန်ဂန်” စာကြည့်တိုက် ဖွင့်ပွဲမှာ “ကျမအနေနဲ့ စာအုပ်တွေအများကြီး ဖတ်သွားမှာပါ။ ဖောင်တိန်တွေ၊ စာအုပ်တွေက အကြမ်းဖက်မှုကို နှိမ်နင်းနိုင်တဲ့ လက်နက်တွေပါ” လို့ မှတ်သားစရာ ကောင်းလောက်အောင် ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ အမျိုးသမီးတွေ ပညာတတ်မှ၊ အမျိုးသမီးတွေ စာဖတ်အား ကောင်းမှသာ သူတို့ကနေ မွေးဖွားလာတဲ့ သား၊ သမီးတွေကို ကောင်းမွန်တည့်မတ်တဲ့ လမ်းညွှန်မှု ပေးနိုင်မှာပါ။ အမျိုးသမီးတွေ ပညာတတ်ဖို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း အဟန့် အတားတွေ၊ အကန့်အသတ်တွေ ရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အစ္စလမ်မစ် အစွန်းရောက်တွေ၊ တာလီဘန်တွေ ကြီးစိုးတဲ့ နေရာတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ ပညာသင်ယူနိုင်ခွင့် အတွက် ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားနေရပါတယ်။
ကျမတို့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အနေအထားကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန်က အမျိုးသမီးတွေထက် စာရင် အခွင့်အရေး ပိုရတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းက အမျိုးသမီးတွေအပေါ် ထားရှိတဲ့ ရှေးရိုးစွဲ အယူအဆတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ မိသားစုတစုမှာ ယောက်ျားလေးရော၊ မိန်းကလေးပါ ကျောင်းနေ အရွယ်ရှိနေတယ်၊ စား၊ ၀တ်၊ နေရေး အဆင်မပြေလို့ ကျောင်းထွက်ရပြီဆိုရင် မိန်းကလေးတွေကပဲ ကျောင်းထွက်ရတဲ့ အရေအတွက် ပိုများနေတာဟာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ငွေကြေး ချမ်းသာတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကနေ မွေးဖွားလာတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ကားကောင်းကောင်းစီးရ၊ ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွေမှာ ပညာသင်ယူခွင့် ရနေတဲ့အချိန်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးရှာတဲ့ ကျေးလက်က မိန်းကလေးတွေဟာ ပညာ တပိုင်းတစနဲ့ ကျောင်းထွက်ရပြီး မိသာစုအတွက် တဘက်တလမ်းက ရတဲ့နည်းနဲ့ ၀င်ငွေရှာပေးနေရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေပါတယ်။ အခမဲ့ ပညာရေးလို့ ဆိုတဲ့ မူလတန်း ပညာရေးကိုတောင် ဆုံးခန်းတိုင်အောင် မသင်ယူနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ ရှိနေတာ နိုင်ငံအတွက် ကောင်းတဲ့လက္ခဏာ မဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘ၀ မြင့်မားလာဖို့အတွက် ဆိုရင် ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးရမှာပါ။
မြန်မာ အမျိုးသမီး တွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံကို ဘာကြောင့် ရောင်းစားခံရသလဲ၊ Sex Worker တွေ ဘာကြောင့် ဖြစ်သွားရတာလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကို စဉ်းစားဖို့လိုလာပါပြီ။ တဘက်က စဉ်းစားကြည့်ရင် မီးဖိုချောင်ထဲမှာပဲ အချိန်ကုန်ရမယ့် ခေတ်လည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။ Career Woman လို့ခေါ်တဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်ဖို့ လိုလာပါတယ်။
အနည်းဆုံးတော့ အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အလုပ်အကိုင်နေရာမှာ “မှီခို” လို့ရေးတာထက် သတ်သတ်မှတ်မှတ် အလုပ်တခု ရေးပြနိုင်တာက ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က အိမ်ထောင်ကျပြီဆိုတာနဲ့ အမျိုးသားဖြစ်တဲ့သူက အလုပ် ထွက်ခိုင်းလို့ အလုပ်ထွက်လိုက်ရတယ် ဆိုတာက အခုခေတ်မှာ မဖြစ်သင့်တော့ပါဘူး။ အားကိုးရာ ရှာတာတတ်တာက မိန်းမသဘာဝပဲမို့ အပြစ်တင်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုဦးဆောင်မယ့် သူကို ရှာနေတာထက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ဦးဆောင်သူဖြစ်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
တချို့ အမျိုးသမီးတွေက အပြင်မှာလည်း ပိုက်ဆံထွက်ရှာရ၊ အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်း အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်ရဆိုတော့ ညည်းတတ် ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီလို လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေ တက်လာတာကို သိမြင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ကျမကိုယ်တိုင် တဘက်က ၀င်ငွေရှာသလို တဘက်က အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်ရပေမယ့် အလုပ်အကိုင်မှာ “မှီခို” လို့ ရေးစရာ မလိုတာကို ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ အိမ်ရှင်မတိုင်း တွေ့ကြုံရမယ့် အခက်အခဲတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေဟာ စိတ်ပျက်စရာ မဟုတ်ဘဲ ရင်ဆိုင် ကျော်လွှားရမယ့် အရာတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ အမျိုးသမီးတွေပါဝင်တဲ့ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ အားကောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သူတွေအဖြစ် အရးပါတဲ့ ကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် ၁၃၂၅ (၂၀၀၀) နဲ့ အမျိုးသမီး ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာ အတိအလင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြေစာပင် ဖြစ်ရတဲ့လူတွေထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပိုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေး စတင် တည်ဆောက်နိုင်မှုနဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘ၀မြင့်မားရေးဟာ အများကြီး ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။
နိုင်ငံတော် ပြုပြင်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ကဏ္ဍသုံးရပ်မှာ ပါဝင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ဆိုကြပါတယ်။ ပထမ ကဏ္ဍက အမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးသားတွေကြားက တန်းတူညီမျှမရှိတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ၊ ပညာရေးနဲ့ အရင်းအမြစ်တွေမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်လာနိုင်ဖို့ လမ်းကြောင်းပြ ကူညီရေးပါ။ ဒုတိယကဏ္ဍက စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မူဝါဒ ချမှတ်ရေးမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်ခွင့်ရရေးပါ။ တတိယ ကဏ္ဍက မိသားစုတွင်းမှာ အမျိုးသားတွေရဲ့ သြဇာကြီးစိုးမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြေရှင်းမှု၊ အပြန်အလှန် လေးစားမှုတွေ အပေါ် အခြေခံတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ပြောင်းလဲရေးမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်နိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာရေးဟာ အရေးကြီးသလိုပဲ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် လုံလောက်တဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ရဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ယူနီဆက်ကနေ ထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်းဇယားတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV ပိုး ကူးက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီး အရေအတွက် တသိန်းကျော် အထိ ရှိပါတယ်။ လိုချင်လို့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကိုသာ အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ လွယ်သင့်ပြီး မလိုချင်ဘဲရတဲ့ ကိုယ်ဝန် မဖြစ်စေဖို့ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးမှုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြုလုပ်ရပါမယ်။ အမျိုးသမီးထုကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ရင်သားကင်ဆာနဲ့ သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနိုင်ပေမယ့် ကာကွယ်ဆေးဟာ ဈေးကြီးနေဆဲမို့ အခမဲ့ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးနိုင်တဲ့ အနေအထား အထိဖြစ်အောင် နိုင်ငံတော်က လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါတယ်။
လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားနေမှ အဲဒီ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ကောင်းမွန်တဲ့၊ တိုးတက်မှု ရှိတဲ့၊ အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်မှာပါ။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံတော် ပြုပြင်တည်ဆောက်ရေးတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဖို့ လိုအပ်နေသလို တဘက် ကလည်း အဲဒီလို ပါဝင်နိုင်ဖို့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဘ၀လုံခြုံမှု ပေးစွမ်းနိုင်ဖို့၊ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်နေပြီလို့ တွေးတောမိပါတယ်။ ။
ရခိုင်ပြည်နယ် ရမ်းဗြဲမြို့နယ်မှ လဝက ဦးစီးသိန်းဇော်သည် နိုင်ငံသား စီစစ်ရေး ကတ်ပြား ပြုလုပ်ရန် လာရောက်သော တိုင်းရင်းသားများအား မိုက်ရိုင်းစွာထပ်မံ ဆက်ဆံခြင်း ဟိန်းဟောက်ခြင်း များပြုလုပ်နေပါသည်။ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေး ကတ်ပြား ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း အမျိုးမ်ျိုး ငွေညှစ်၍ တောင်းခံနေပါသည်။ ယခုလက်ရှိအချိန်တွင်လည်းတိုင်းရင်းသားများအား ညစ်ပတ်ပြီးနိုင်ငံသားစီစစ်ရေး ကတ်ပြားတစ်ခုကို ၃၀၀၀ ကျပ် ကို လဝက ဦးစီး သိန်းဇော် ကိုယ်တိုင် မိမိအခန်းတွင်း၌ တောင်းခံနေပါသည်။ ပထမအကြိမ် အသိပေး တင်ပြခဲ့သော်လည်း ထိရောက်စွာအရေးယူမူ မရှိ၍ သူကိုယ်တိုင် ထင်တိုင်း လုပ်နေပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ၄င်းလဝက ဦးစီးသိန်းဇော်အား အရေးယူ ပေးနိုင်ပါရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ သိရှိနိုင်ပါရန် ဒုတိယ အကြိမ် တင်ပြ လိုက်ပါသည်။
အသေးစားနဲ့အလတ်စား စီးပွားရေး အတွက် မြန်မာနဲ့ဂျပန် လက်မှတ်ထိုး
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ​အသေးစားနဲ့ ​အလတ်စား ​စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ​၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ​မြန်မာနဲ့ ​ဂျပန်နိုင်ငံတို့ ​ပူးတွဲ ​သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။
သဘောတူညီမှုစာချုပ်ကို ​ဂျပန်နိုင်ငံက ​SME ​Support ​Japan ​ခေါ် ​အသေးစားနဲ့ ​အလတ်စာ ​စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေနဲ့ ​မြန်မာ ​ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ​စက်မှုစီးပွားရေးအသင်း ​UMFCCI ​တို့က ​ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ​သဘောတူ ​လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ ​ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ​သဘောတူစာချုပ် ​လက်မှတ်ရေးထိုး ​လိုက်တဲ့အတွက် ​ဂျပန်နိုင်ငံက ​အသေးစားနဲ့ ​အလတ်စား ​စီးပွားရေး ​လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ ​မြန်မာ ​ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ​စက်မှုစီးပွားရေး ​အသင်းရဲ့ ​နောက်ဆုံးရ ​စီးပွားရေး ​အချက်အလက်တွေကို ​၀င်ရောက်ရယူခွင့် ​ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ​ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ​စက်မှုစီးပွားရေးအသင်းဟာ ​ပြည်တွင်းကစီးပွားရေးအဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ​၂၀၀၀၀ ​ကျော်လောက်ပါရှိပါတယ်။
မြန်မာ ​ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ​စက်မှုစီးပွားရေးအသင်း ​အနေနဲ့ ​ဂျပန်စီးပွားရေး ​ကုမ္ပဏီတွေအတွက် ​လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ​စီးပွားရေးအချက်အလက်တွေကို ​အစွမ်းကုန် ​အသိပေးလုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာ ​ဖြစ်တယ်လို့ ​မြန်မာ ​ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ​စက်မှုစီးပွားရေးအသင်း ​ဥက္ကဌ ​ဦးဝင်းအောင်က ​ပြောပါတယ်။
မြန်မာ့ စီးပွားရေး အားကောင်းရန် စဉ်းမျဉ်း၊ ဥပဒေ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဖို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ် ထောက်ပြ
မြန်မာ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ပိုမို ကောင်းမွန် လာစေ ရန်မှာ ကောင်းမွန်သည့် စည်းမျဉ်း ဥပဒေဖြင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲ မှုများ ကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက် လာသည့် လမ်းကြောင်း မှန်သို့ ရောက်ရှိရန် လိုအပ်သည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေး ကော်ပိုးရေးရှင်းတို့ ပူးတွဲပြီး ပြုစုသည့် အစီရင်ခံစာ သစ်တွင် ဖေါ်ပြ ထားပါသည်။
“မြန်မာ နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာ အဆက်ပြတ် နေပြီး အခုမှ စတင် ပွင့်လင်း လာတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ စီးပွားရေး လုပ်ရာမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေ ပေါ်ပေါက် လာဖို့ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲ မှုတွေ လုပ်ရ ပါလိမ့်မယ်။ အခုတော့ လမ်းကြောင်း မှန်ပေါ် ရောက်လာ နေပါပြီ” ဟု ကမ္ဘာ့ ဘဏ်၏ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ခန်သန်ရှန်ကာမှ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့၌ ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင် ခံစာ၌ ဆိုထား ပါသည်။
မြန်မာ အစိုးရသည် စီးပွားရေး ချဲ့ထွင် နိုင်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်နေသည့် စည်းမျဉ်း ဥပဒေ များကို ဖယ်ရှား ပေးခြင်းဖြင့် လွယ်ကူ အဆင်ပြေသည့် အခြေအနေမျိုး ရရှိရန် အားပေး ဆောင်ရွက် နေသည်ဟု ဆိုနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်က ပြောဆို ခဲ့ပါသည်။
အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေး ကော်ပိုရေးရှင်း၏ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ချားလ်ရှနိုက်ဒါ ကမူ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေ ကောင်းမွန် စေရန်မှာ လိုအပ်သည့် စည်းမျဉ်း ဥပဒေနှင့် အညွှန်းကိန်း များကို ပထမ အကြိမ် အဖြစ် လေ့လာ နိုင်ခြင်းက မြန်မာ့ စီးပွားရေး ကဏ္ဍ အတွက် ကြီးမားသည့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ခြေလှမ်း တရပ် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ထားပါသည်။
မြန်မာ့ စီးပွားရေး၏ အခြေ အနေကို Doing Business အစီရင် ခံစာထဲ ပါလာခြင်း အားဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ရေး၏ အကျိုး ရလာဒ်များကို တိုင်းတာ အကဲဖြတ် နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် စင်ကာပူ နိုင်ငံသည် ဒေသခံ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် များအတွက် စီးပွားရေး ဆောင်ရွက်ရန် အကောင်းဆုံး စည်းမျဉ်း ဥပဒေများ ပြဌာန်း ထားသည့် နိုင်ငံဟု သတ်မှတ် ထားကြပြီး ဟောင်ကောင်နှင့် တရုတ် နိုင်ငံ တို့သည် ဒုတိယ နေရာတွင် ရပ်တည်လျှက် ရှိနေ ပါသည်။
ယခင် နှစ်တွင် ကမ္ဘာပေါ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် စည်းမျဉ်း ဥပဒေများ ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက် ရာတွင် အတိုး တက်ဆုံး (၁၀) နိုင်ငံ ထဲမှ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံလည်း ပါဝင် လာပါသည်။ ယခု နှစ်တွင်မူ နယူးဇီလန်၊ အမေရိကန်ပြည် ထောင်စု၊ ဒိန်းမတ်၊ မလေးရှား၊ ကိုးရီးယား၊ ဂျော်ဂျီယာ၊ နော်ဝေး၊ ဗြိတိန် နိုင်ငံတို့ ဖြစ်ပါသည်။
Doing Business အစီရင် ခံစာသည်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေး ကော်ပိုရေးရှင်းတို့ ပူးတွဲ ပြုစု သည့် အစီရင် ခံစာ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ များ၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း အစအဆုံး လေ့လာသည့် အစီရင် ခံစာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာ ထဲသို့ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း ဥပဒေ များလည်း ထည့်သွင်း လာသဖြင့် တိုးတက်မှု တခု ဖြစ်ကြောင်း ဆိုကြ ပါသည်။
မြေလွတ်မြေရိုင်းပေါ်တွင်စီမံကိန်းလုပ်ရန် လျှောက်ထားသော်လည်းလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့်မြေများ ပြန်သိမ်းမည်ဟုဝန်ကြီးပြော
မြေလွတ်မြေရိုင်းများပေါ်တွင် သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစသော စီမံကိန်းများလုပ်ကိုင်ရန် လျှောက်ထားသော်လည်း လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့် မြေများကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ ပြန်လည်သိမ်း ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းစိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဦးမြင့်သန်းက ပြောသည်။
၀န်ကြီးဦးမြင့်သန်းက မန္တလေးတိုင်းအတွင်းရှိ မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းများကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ကိုင်ရန် လျှောက်ထား၊ လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းရှင်များကို အောက်တိုဘာ လ ၂၉ ရက်က မန္တလေးမြို့ ၂၆ လမ်း၊ ၆၆ လမ်းရှိ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လျှောက်ထားလိုသူများသည် အထောက်အထားအစုံအလင်ဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်နောက်ဆုံးထားကာ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးထား မတင်ပြသူများ၊ အထောက်အထား မပြနိုင်သူများ၊ ဆက် လက်မလုပ်ကိုင်နိုင်သူများ၏ မြေများကို ပြန်လည်သိမ်းယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် ယခင် လျှောက်ထားသူမဟုတ်ဘဲ ၀ယ်ယူလုပ်ကိုင်သူများ သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များ ချိုးဖောက်၍ စိုက်ပျိုး ထားသူများကိုလည်း ပြန်လည်သိမ်းယူမည်ဟု ဆိုသည်။
ဒီမိုကရေစီ အခြေခံသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆီသို့
မောင်ကိုနီ (တရားရုံးချုပ် ရှေ့နေ)
၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသလား။ ထိုမေးခွန်းအပေါ် ကျနော့်အနေဖြင့် ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါသည်ဟု နိုင်ငံအကျိုးကို ရှေ့ရှု၍ ရိုးသားစွာ တင်ပြလိုပါသည်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် ထိုနိုင်ငံ၏ အသက်ဝိညာဉ်နှလုံးသားဟု ဆိုရလောက်အောင် အရေးပါလှသည့် ဥပဒေကြီး တခုဖြစ်ရာ ဥပဒေဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ ယုတ္တိဗေဒ သဘောတရားဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွန်းများနှင့်လည်း ညီညွှတ်ရန် လိုအပ်လှပေသည်။
သို့ဖြစ်ရာ နိုင်ငံသားအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံရှိရပါသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် စစ်အစိုးရက ဦးဆောင်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေသည် အထက်ပါ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု နည်းပါးသည့်အပြင် ပြည်သူလူထု ဆန္ဒသဘောထား နှင့်လည်း ညီညွတ်မှု မရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ နိုင်ငံသားအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို နိုင်ငံသားအများစု၏ ဆန္ဒအပေါ် အခြေခံ၍ ရေးသားပြဋ္ဌာန်း မှသာလျှင် တရားမျှတ သဘာဝကျမည် ဖြစ်ပါသည်။
ယင်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို “ပြင်ဆင်မည်လား၊ အသစ်ရေးဆွဲမည်လား” ဟူသည့် ကိစ္စတရပ်သည် လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှသည် အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ ထူထောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး အထိ အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်လာရသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် အခြေအနေ အရပ်ရပ်အပေါ် တပ်မတော်က အာဏာလွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပြီးနောက် တပ်မတော် အကြီးအကဲက ရွှေးကောက်ပွဲ အလျင်အမြန်ကျင်းပ၍ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးချယ်ခံရသည့် အာဏာပိုင် တို့က သင့်လျော်မည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲ၍ တိုင်းပြည်အား ဆက်လက် အုပ်ချုပ်သွားရန် ဖြစ်ကြောင်း ကတိစကားများ ပြောကြားခဲ့ပြီး နောက် ၁ နှစ် အတွင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၁၉၈၉ ကို ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်။ နောက် ၁ နှစ်အကြာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲကြီး ကျင်းပပေးခဲ့သည်။
ထို့နောက် စစ်အစိုးရက အနိုင်ရ ပါတီအား နိုင်ငံတော်အာဏာကို လွှဲပြောင်း ပေးရမည့်အစား အာဏာကို လွှဲပြောင်းပေးခြင်း မပြုဘဲ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ တရပ် ရေးဆွဲရန် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုကာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ တရပ် ရေးဆွဲရန် အမျိုးသားညီလာခံ တရပ်ကို ဖွဲ့စည်းကာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပေဒ အသစ် ရေးဆွဲရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်။
ဒီမိုကရေစီ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတရပ်ကို ရေးဆွဲရာတွင် နိုင်ငံသားအားလုံး ပါဝင်၍ အကြံပြုခွင့်၊ ငြင်းခုံဆွေးနွေး တင်ပြခွင့် ရှိသင့်သော်လည်း ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံသားများဘက်မှ သဘောထားဆန္ဒကို မတင်ပြနိုင်အောင် ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့ တွင် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၊ ဥပဒေအမှတ် – ၅/၉၆ ကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဥပဒေ ခေါင်းစဉ်ကို “နိုင်ငံတော်တာဝန်ကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ စနစ်တကျလွှဲပြောင်း ပေးရေးနှင့် အမျိုးသား ညီလာခံ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ရေး တို့ကို နှောင့်ယှက် ဆန့်ကျင်ခြင်းမှ ကွာကွယ်သည့် ဥပဒေ”ဟု သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ဥပဒေပုဒ်မ – ၃ တွင် အမျိုးသားညီလာခံက ရေးဆွဲပြုလုပ်နေသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အပေါ် ထိခိုက်ပျက်ပြားစေရန် လှုံ့ဆော် ဟောပြော ရေးသားခြင်း စသည့် ကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံသားများ မည်သူမျှ မပြုလုပ်ရန် ကန့်သတ် ပိတ်ပင်ထားပြီး အဆိုပါ ကန့်သတ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်လျှင် ထောင်ဒဏ်အနည်းဆုံး ၅ နှစ်မှ အများဆုံး နှစ် ၂၀ အထိ ချမှတ်မည် ဟု ပုဒ်မ ၄ ၌ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ဥပဒေပုဒ်မ ၅/၉၆ အရ နိုင်ငံတော်၏ အသက်ဝိညာဉ် ဟုခေါ်ဆိုအပ်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲသည့် ကိစ္စတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပါဝင်တင်ပြခွင့် မရခဲ့ကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ယခုအခါ အထက်ဖော်ပြပါ ဥပဒေအမှတ် ၅/၉၆ ကို (၁၅-၁-၂၀၁၃)နေ့တွင် ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှ ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီ ဖြစ်၍ ထိုဥပဒေ တရားမ၀င်တော့ပါ။ သို့သော် ပြည်သူ့ သဘောဆန္ဒကို ထင်ဟပ်မှု မရှိသည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို စစ်အစိုးရက တဖက်သတ် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။
အထက်တွင် တင်ပြခဲ့သည့် ဥပဒေအမှတ် ၅/၉၆ အရ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကြီးကို ရေးဆွဲစဉ်အခါက ပြည်သူတို့၏ အကြံဥာဏ် အယူအဆများကို တင်ပြခွင့်မရခဲ့ကြဘဲ ယခုအခါ ဆွေးနွေးတင်ပြနိုင်သည့် အခွင့်အရေး ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူအများ၏ သဘောဆန္ဒနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတရပ် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် လက်ရှိ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံး စဉ်းစား ဆောင်ရွက်သင့်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ အင်အား တောင့်တင်းခိုင်မာမှု၊ စီးပွားရေးအရ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့် နိုင်ငံတကာအလယ်တွင် ဂုဏ်သိက္ခာ ကြီးမားထည်ဝါမှု တို့သည် ထိုနိုင်ငံတွင် ကျင့်သုံးနေသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ဆက်နွှယ်မှု ရှိနေပါသည်။
သာဓကအားဖြင့် ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင် စစ်လက်နက် အင်အားအရာတွင် အကြီးမားဆုံး၊ ငွေကြေး ဓနကြွယ်ဝ ချမ်းသာမှု အရာတွင်လည်း ပထမအဆင့် ရှိပြီး သြဇာတိက္ကမ အရာတွင်လည်း ထိပ်တန်းဖြစ်သည့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် တချိန်က မြန်မာနိုင်ငံ ကဲ့သို့ပင် အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီဘ၀မှ လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပေဒတရပ် ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းကာ ယင်း အခြေခံဥပဒေနှင့် အညီ စီမံအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၄၀ နီးပါး ရှိသည့်တိုင် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း နိုင်ငံကြီး အဖြစ် ရပ်တည်နေနိုင်ခြင်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာကြသည့် အတွက်ဟု ယူဆရပါသည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံနည်းတူ ဥရောပတိုက်တွင်လည်း ဒီမိုကရေစီ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာကျင်သုံးကြသော နိုင်ငံများ၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာ၍ ထိပ်တန်းအဆင့်တွင် ရှိသည်ကို လေ့လာသိရှိ နိုင်ပါသည်။
အာရှနိုင်ငံများတွင်လည်း တချိန်က အာဏာရှင်စနစ် ကျင့်သုံးခဲ့ရာမှ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို ပြောင်းလဲလိုက်သည့် အခါ နိုင်ငံ အဘက်ဘက်မှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် အင်အားကြီးလာရုံမျှ မက ဂုဏ်သိက္ခာပါ တိုးတက်လာသည်ကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအား ကြည့်ရုံမျှဖြင့် အလွယ်တကူ သိမြင်နိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအား စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဖြင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာ တိုင်းပြည်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ အံ့မခန်းရှိခဲ့ပြီး၊ အာရှတိုက်တွင် အလွန်ချမ်းသာ၍ ပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံများက အားကျအထင်ကြီးခြင်း ခံခဲ့ရကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများက သက်သေခံ နေပါသည်။ နောက်ပိုင်း ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းယူပြီးနောက် ဒီမိုကရေစီ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မရှိဘဲ အာဏာရှင်စနစ်ဖြင့် ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာ တိုင်းပြည်အခြေအနေမှာ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံများအဆင့် အထိ ကျသွားခဲ့သည့် အချက်မှာလည်း ငြင်းမရသော သမိုင်းသက်သေဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်တွင် နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြု လေးစားခံရလောက်အောင်၊ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသည့် နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်အောင် ကောင်းမွန်သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးတရပ် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရန် လိုအပ်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်သင့်ကြောင်း လတ်တလောပေါ်ပေါက်နေသည့် ဖြစ်ရပ်သာဓကများ အကြောင်း တင်ပြပါမည်။ သာဓကအများအပြား ရှိသော်လည်း အရေးပါ၍ ထင်ရှားသည့် သာဓက အနည်းငယ်ကိုသာ တင်ပြပါမည်။
ပထမသာဓက တခုအနေနဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် စတုတ္ထအစည်းအဝေးတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးနှင့် လွှတ်တော်များအကြား ပြဿနာပေါ်ပေါက်ခဲ့ရာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်များ နှုတ်ထွက်မည်လား သို့မဟုတ် လွှတ်တော်များမှ စွပ်စွဲပြစ်တင်၍ ထုတ်ရမည်လား ဆိုသည်အထိ ပြဿနာ ကြီးထွားခဲ့သည်ကို အများသိကြပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပြဿနာအပေါ် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက လွှတ်တော်သို့ သ၀ဏ်လွှာ ပေးပို့၍ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းသင့်ကြောင်း အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အချက်အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ကိုယ်တိုင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ပြင်ဆင်ရန် အချက်များ ရှိနေသည်ကို လက်ခံ သဘောတူသည် ဟု ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
ဒုတိယသာဓကအဖြစ် များအကြာမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကိစ္စရပ်များ အများအပြားကို ခြုံ၍ တင်ပြပါမည်။ စာရင်းစစ်ချုပ် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ခုံရုံးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေများ အပါအ၀င် အချို့သော ဥပဒေ များကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ပိုမိုကောင်းမွန်၍ ဒီမိုကရေစီ အနှစ်သာရနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြင်ဆင် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်း ခဲ့ရာ နိုင်ငံတော်သမ္မက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် မညီကြောင်း အကြောင်းပြ၍ အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း မပြုဘဲ လွှတ်တော်သို့ မှတ်ချက်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
“ဤ ပြဿနာသည် သမ္မတနှင့် လွှတ်တော်တို့ အကြား အားပြိုင်မှု ပြဿနာ”ဟု ပုံကြီးချဲ့ ပြောဆို ရေးသားမှုများကိုလည်း တွေ့ရသည်။ သမ္မတနှင့် လွှတ်တော်ကြား အားပြိုင်စရာ မရှိပါ။ စည်းကမ်း ဥပဒေနှင့် အညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ သာ လိုပါသည်။ သို့သော် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အခြေခံ ဥပဒေက မျှတညီညွတ်မှု မရှိသဖြင့် ယင်းသို့ ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
တနည်းအားဖြင့် ယင်း ပြဿနာမှာ “စစ်အာဏာပိုင်တို့ တဖက်သတ် ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် လက်ရှိ ပြည်သူတို့ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားသည့် လွှတ်တော်များ အကြား ဖြစ်ပွားနေသော ပြဿနာသာ ဖြစ်သည်” ဟု တိတိကျကျ ဆိုရမည်။ ယင်းသည် ပြဿနာ၏ နေရာအမှန်ကို ထောက်ပြနေခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားများကို ကိုယ်စားပြုသည့် လွှတ်တော်ကို အားပြိုင်နေခြင်း မဟုတ်ဟု ယူဆရသည်။
လွှတ်တော်များတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အကြောင်းပြု၍ ဥပဒေများပြင်ဆင်ရေး ကိစ္စ အကြိမ်များစွာ အငြင်းပွားနေရခြင်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ မပြည့်စုံမှု၊ အားနည်းမှုများကြောင့်သာ ဖြစ်ပြီး၊ ပြည်သူတို့ကို ကိုယ်စားပြုသည့် လွှတ်တော်များကို လုံးဝအပြစ်တင်ရန် အကြောင်းမရှိဟု ယူဆရပါသည်။ လွှတ်တော်ကို အပြစ်တင်ခြင်းသည် ပြည်သူတရပ်လုံးကို အပြစ်တင်ခြင်းဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် နောင်တွင် ယခုကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုမျိုး မရှိရအောင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကိုသာ ပြင်ဆင်သင့်သည် (သို့မဟုတ်) ပြင်ဆင်ရန် ခက်ခဲပါက အသစ်ပြန်လည် ရေးဆွဲသင့်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။
တတိယသာဓက (သို့မဟုတ်) အရည်အချင်းဆိုင်ရာပြဿနာကို ဆက်လက်တင်ပြပါမည်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံကို စီမံအုပ်ချုပ်ရာ တွင် ဥပဒေပြုအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် တရားစီရင်ရေး အဖွဲ့ဟူ၍ အဓိကအဖွဲ့ကြီး ၃ ဖွဲ့ရှိရာ ထိုအဖွဲ့အစည်းများတွင် အရည်အချင်း ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်မှသာ နိုင်ငံ့ကောင်းကျိုးနှင့် တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ နိုင်ငံတော်အား စီမံအုပ်ချုပ်ရာတွင် အရည်အချင်းရှိသူများ၊ စိတ်ရင်း စေတနာ မှန်ကန်သူများ ပါဝင်ခွင့် ရရှိအောင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို စီစဉ်ရေးဆွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲရာတွင် အရည်အချင်းရှိသော လူတော်လူကောင်းများ နိုင်ငံတော်အား စီမံအုပ်ချုပ်ရာတွင် ပါဝင်ခွင့်မရနိုင်အောင် ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့ ရေးသားထားမှုများကြောင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြဿနာတရပ် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူ ရှေ့နေဦးစောလှိုင်သည် စစ်အာဏာပိုင်များ ရေးဆွဲခဲ့သော ၁၉၈၉ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအရ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အင်းတော်မြို့နယ်မှ အရွေးခံခွင့်ရခဲ့ပြီး အနိုင်ရခဲ့သော်လည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ ပြုလုပ်သည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အရွေးခံခွင့် မရှိဟု ဆုံးဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
အလားတူ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် သမ္မတအဖြစ် အရွေးခံပိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ ဒုသမ္မတအဖြစ် အရွေးခံခွင့်ရှိသူ၊ ၀န်ကြီးများနှင့် အခြားသော အရေးပါသည့် နိုင်ငံ့တာဝန် ထမ်းဆောင်မည့်သူများ၏ အရည်အချင်းများကို သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းရာတွင်လည်း အရည်အချင်းရှိသူများ၊ ပြည်သူအများလိုလားသူများ မပါဝင်နိုင်အောင် ကန့်သတ်ချက်များ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်း ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
နိုင်ငံတော်အာဏာ၏ ပင်ရင်းပိုင်ရှင်မှာ နိုင်ငံသားပြည်သူများသာ ဖြစ်ရာ နိုင်ငံသားတို့၏ ဆန္ဒသာ အဓိက ဖြစ်သင့်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲသူ လူတစု၏ ဆန္ဒကိုသာ အလေးထားရမည် ဆိုလျှင် နိုင်ငံသားတို့၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ နောက်တန်းသို့ ရောက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး မည်သည့်အခါမှ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဖြစ်လာမည် မဟုတ်ပေ။
မြန်မာ-အန်္ဒိယ ကုန်သွယ်လမ်းပျက်စီးနေခြင်းကြောင့် ရေလမ်းကြောင်းတွင် ခရီးသည်သုံးဆမြင့်တက်
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးဝမြို့မှ တမူးနှင့် ချင်းတောင်ဒေသများအထိ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တောင်ပေါ်လမ်း များပျက်ဆီးနေခြင်းကြောင့် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးတွင် ခရီးသည်သုံးဆခန့်မြင့်တက်လာကြောင်း စစ် ကိုင်းတိုင်းရေယာဉ်များ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ရွှေက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
မြန်မာ- အန်္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန် သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း တစ်နေရာဖြစ်သော မုံရွာ-ပုလဲ-ဂန့်ဂေါလမ်း မကြီးတွင် အောက်တိုဘာလ ၂၁ရက်မှ စတင်ကာ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောကြောင့် လမ်းများပျက် ဆီးခဲ့ရသည်။ ထိုသို့လမ်းပျက်ဆီးပြီး ကားလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုများ ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် ချင်းတွင်းမြစ်အ တွင်း ရေလမ်းခရီးကို အားထားလာရခြင်း ဖြစ်သည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာဆိပ်ကမ်းမှ ခရီးသည်တင်အမြန်ရှပ်ပြေး ရေယာဉ်ကြီးများသည် နေ့စဉ် မနက် ၄ နာရီ မှစတင်ပြေးဆွဲလျက်ရှိသည်။ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရေယာဉ်၌ စီးနင်းလိုက်ပါသော ခရီးသည်တစ်ချို့မှာ တောင်ပေါ်လမ်း၌ ခရီးစရိတ်ပြတ်လတ်ခဲ့သူများဖြစ်သည်။
“တချို့ ခရီးသည်တွေက မော်တော်ခမပြောနဲ့ သူတို့စားသောက်ဖို့ကို ပိုက်ဆံမရှိကျတော့ဘူး” ဟု မုံရွာ-ကလေးဝ- မော်လိုက်-ဖောင်းပြင်-ဟုမ္မလင်း ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ရှပ်ပြေးအမြန်ရေယာဉ် ဂိတ် မှူးက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
အိန္ဒယ - မြန်မာ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းသည် ပွင့်လင်းရာသီကာလများတွင် မုံရွာ - ယာကြီး - က လေးလမ်းမကြီးမှ ပြေးဆွဲလေ့ရှိသော်လည်း မိုးရာသီကာလတွင် ထိုလမ်းမကြီးသည် တောင်ပေါ်မြေသား လမ်း ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ပြေးဆွဲမရနိုင်ဘဲ မုံရွာ - ပုလဲ - ဂန့်ဂေါလမ်းမှ ပြေးဆွဲရခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအခါ မုံရွာ - ပုလဲ- ဂန့်ဂေါလမ်းလည်း ထပ်မံပျက်စီးကာ ပိတ်ဆို့နေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုလမ်းမကြီးပေါ်တွင် အောက်တိုဘာလ ၂၁ရက်မှ ၂၇ရက်အထိ လမ်းပျက်စီးခြင်းကြောင့် ကုန်တင်ကားကြီး ၁၅၀ခန့် ပိတ်ဆို့ နေခဲ့သည်။
သမိုင်းဝင်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ညီလာခံကို ဝနဲ့ မိုင်းလား မတက်ရောက်
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ​သမိုင်းဝင်မယ့် ​ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ​တိုင်းရင်းသား ​လက်နက်ကိုင် ​ခေါင်းဆောင်များ ​ညီလာခံကို ​ဒီကနေ့ကစပြီး ​ကချင်ကေအိုင်အို ​ရဲ့ ​ဌာနချုပ် ​လိုင်ဇာမြို့မှာ ​စတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး ​၀ ​ပြည် ​သွေးစည်းညီညွတ်ရေး ​တပ်မတော် ​UWSA ​နဲ့ ​အမျိုးသား ​ဒီမိုကရက်တစ် ​မဟာမိတ် ​တပ်မတော် ​(NSAA-ESS) ​မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့တို့ ​မတက်ရောက်ဘူးလို့ ​သိရပါတယ်။
့ ​အောက်တိုဘာ ​၃၀ ​ရက်နေ့ကစပြီး ​၃ ​ရက်အကြာ ​ပြုလုပ်မယ့် ​အဲဒီညီလာခံကို ​KIO ​က ​စီစဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး ​ပြည်တွင်း၊ ​ပြည်ပ ​အခြေစိုက် ​တိုင်းရင်းသား ​လက်နက်ကိုင် ​တပ်ဖွဲ့ ​၁၉ ​ဖွဲ့ကို ​ဖိတ်ကြားထားပေမယ့် ​ ဝတပ်ဖွဲ့နဲ့ ​မိုင်းလား ​အဖွဲ့တွေကတော့ ​လိုင်ဇာမြို့ကို ​ရောက်မလာဘူးလို့ ​ဆိုပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ​UWSA ​၀ ​တပ်ဖွဲ့ရဲ့ ​၀ိန်းကောင်းခရိုင် ​အတွင်းရေးမှူး ​ဦးစောလွင်က ​၀တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ ​လိုင်ဇာညီလာခံကို ​မတက်ရောက်နိုင်တာ ​မှန်ကန်ကြောင်း ​အခုလို ​အတည်ပြု ​ပြောပါတယ်။
ပထမ ​ပြောတာတော့ ​သွားမယ်လို့ ​ပြောတာ၊ ​အယ် ​သွားတဲ့အချိန်က ​သူတို့ ​မသွားဖြစ်ဘူး ​ဖြစ်နေတယ်၊ ​သူတို့ ​မသွားဖြစ်တာ ​ဘာကိစ္စနဲ့လည်း ​မသိဘူး။ ​မေးကြည့်တာတော့ ​မသွားဘူးတဲ့ ​မိန်းလား ​နဲ့ ​ကျနော်တို့ ​၀ ​က ​မသွားဘူးတဲ့ ​ဒါကတော့ ​ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲတော့ ​မသိဘူး၊ ​ကျန်းမာရေးတော့ ​မဖြစ်ဘူး ​ဒါပေမယ့် ​တခုခုတော့ ​ဖြစ်မယ်ထင်တယ်၊ ​အရင်တစ်ခေါက်လည်း ​မသွားဘူးလေ ​ဒီတစ်ခေါက်လည်း ​မသွားဘူး။ ​
အမျိုးသား ​ဒီမိုကရက်တစ် ​မဟာမိတ် ​တပ်မတော် ​(NSAA-ESS) ​မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့က ​ဆက်ဆံရေးရုံး ​အရာရှိ ​တစ်ဦးကတော့ ​မတက်ရောက်နိုင်တဲ့ ​ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ​ပြောဆိုခွင့်မရှိဘူးလို့ ​ပြောပါတယ်။ ​
အဲ့ဒီကိစ္စကို ​ကျနော်တို့ ​ပြောလို့ ​မရပါဘူးခင်ဗျ၊ ​ကျနော်တို့လည်း ​ကောင်းကောင်းလည်း ​မသိဘူးလေ၊ ​သွားတော့ ​မသွားတက်ပါဘူးခင်ဗျား။
မိုင်းလား ​နဲ့ ​UWSA ​တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ​နီးစပ်သူလည်းဖြစ် ​တရုတ် ​မြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက် ​စစ်ရေးလေ့လာ ​သုံးသပ်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ​ဦးအောင်ကျော်ဇော် ​ကတော့ ​သူ့ရဲ့အမြင်ကို ​အခုလို ​သုံးသပ် ​ပြောဆိုပါတယ်။
ကျနော်တို့လည်း ​မေးကြည့်ပြီးပြီ ​သူတို့က ​ဘာမှ ​အတိအကျ ​ဖြေတာ ​မရှိပါဘူး၊ ​သူတို့ပြောတာက ​၀သပ ​ကမသွားဘူး ​သူတို့လည်း ​မသွားဘူး ​၀သပ ​နဲ့ ​သူတို့နဲ့ ​က ​ညီနောင်ပါတီ ​အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကိုး ​မသွားကြဘူး ​အဲ့ဒါပါပဲ၊ ​တဖက်ကလည်း ​စဉ်းစားစရာရှိတာပေါ့ ​သူတို့ ​စောစောကြိုပြောထားတာ ​ရှိတဲ့ ​၀သပ ​အနေနဲ့ ​ဒီ ​နေရှင်းနယ် ​ပီစ် ​စေ့ဖားရား ​အကုတ်ကို ​လက်မှတ်ထိုးစရာ ​မလိုဘူးပေါ့ ​အရင်တုန်းကလည်း ​ထိုးဖူးတယ်ပေါ့ ​ပြောဖူးတာကိုး ​အယ် ​အဲ့အတွက်ကြောင့် ​မလိုအပ်လို့ ​ဒီအစည်းအဝေးက ​အဲ့မှာ ​ထိုးမထိုး ​ဆိုတာကို ​ဆုံးဖြတ်ကြမှာကိုး ​အဲ့ဒါကြောင့် ​မသွားတာလည်း ​ဖြစ်ရင် ​ဖြစ်မှာပေါ့ ​အခြားအကြောင်းတွေလည်း ​အများကြီး ​ရှိနုိုင်ပါတယ်။ ​အိမ်နီးနားချင်း ​တရုတ်ပြည်ရဲ့ ​ဖိအားလားပေါ့ ​ဒါမှ ​မဟုတ်လည်း ​တခြား ​ဗမာအစိုးရက ​ပါဝင်မှာ ​မကြိုက်လို့ ​မသွားတာလားပေါ့ ​ဒီလိုလည်း ​စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိအစိုးရကနေ ​လာမည့် ​နိုဝင်ဘာလထဲမှာ ​တနိုင်ငံလုံး ​အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ​သဘောတူ ​လက်မှတ် ​ရေးထိုးဖို့ ​ပြင်ဆင်ထားပြီး ​အဲဒီပွဲမှာ ​လက်မှတ်ထိုးမထိုး ​ဆိုတာကိုတော့ ​အခုကျင်းပတဲ့ ​တိုင်းရင်းသား ​လက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ​ညီလာခံ ​က ​ဆွေးနွေးကြမယ့်အကြောင်း ​ရေဒီယို ​သြစတေးလျ ​သတင်းထောက် ​သန်းကျော်စိုးက ​သတင်းပေးပို့ ​ထားပါတယ်။
သုံးရက်ကြာ ​ကျင်းပမယ့် ​တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ​ခေါင်းဆောင်များ ​ညီလာခံကို ​လက်နက်ကိုင် ​အဖွဲ့ ​၁၉ ​ဖွဲ့ကို ​ဖိတ်ကြားထားပေမယ့် ​၁၆ ​ဖွဲ့က ​ကိုယ်စားလှယ်အယောက်ပေါင်း ​၆၀ ​လောက် ​တက်ရောက်မှာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ​လက်နက်ကိုင် ​တိုင်းရင်းသား ​ညီလာခံ ​ပြီးဆုံးတဲ့အခါ ​ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ​ကော်မတီအဖွဲ့က ​မြန်မာအစိုးရရဲ့ ​ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီအဖွဲ့နဲ့ ​တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီး ​အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအကြောင်း ​နိုဝင်ဘာလ ​၃ ​ရက်နေ့ကျရင် ​ဆွေးနွေးကြမှာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရအတွက် ​လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း ​အားလုံးနဲ့ ​အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့က ​အရေးကြီးတဲ့အတွက် ​အပူတပြင်း ​ကြိုးစားနေပြီး ​တစ်နိုင်ငံလုံး ​အတိုင်းအတာ ​အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ​လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရင်တော့ ​နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေ ​စတင်မယ်လို့ ​ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာသတင်းများ October,31st,2013
( 80 )ယဉ်ကျေးမှုလှိုင်းနှင့် ကိုရီးယား ကား အရောင်းမြှင့်မည်
( 79 )Ethnic summit could help build peace in nation
( 78 )တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်များ ညီလာခံဖွင့်လှစ်
( 77 )China industry expo-Myanmar kicks off in Yangon
( 76 )လျှပ်စစ်အား ပိုထုတ်နိုင်ရင် မီတာခပြန်လျှော့မယ်လို့ပြော
( 75 )Myanmar defense chief stresses border security with India
( 74 )အခြားပါတီများကို ရန်ဖက်လိုသဘောမထားဖို့ ဦးရွှေမန်းပြော
( 73 )Will Laiza Ethnic Summit make another historic landmark?
( 72 )၀န်ကြီးဌာနတွေ လိုသလောက်သာ ဘတ်ဂျက်တောင်းခံသင့်
( 71 )Myanmar Stresses Border Security With India
( 70 )ဆင်းရဲနွမ်းပါး ကလေးငယ်များအား အဟာရတိုက်ကျွေး
( 69 )Aung San Suu Kyi: complicity with tyranny
( 68 )သိန်း ၇၀၀ ဖိုး စိတ်ကြွဆေးများ မူဆယ်နယ်စပ်ဂိတ်မှာ ဖမ်းမိ
( 67 )Aung San Suu Kyi: Latest to fail the Rohingya
( 66 )လူငယ်များ ပုံမှန်ဘ၀ရောက်ရှိရန် အမြင်ဖွင့်ပညာပေးမှု အရှိန်မြင်
( 65 )Thais seek Myanmar aid to curb smuggling
( 64 )စစ်တောင်းမြစ်ရေလျှံပြီး ကျေးရွာများ ရေဘေးကြုံနေရ
( 63 )Myanmar seeks Japan help for economic zone
( 62 )အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ လွိုင်ကော်မြို့ပါတီများ တိုက်တွန်း
( 61 )Myanmar seeks Japan help for economic zone
( 60 )ဟိန္ဒားသတ္တုတွင်းအတွက် ဂျာမဏီက ယူထားသည့် အကြွေးပြန်ဆပ်ရမည်
( 59 )Freedom of Hate Speech
( 58 )အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးများ ပိုမိုပညာပေးဖို့ လိုအပ်နေ
( 57 )Myanmar's Rice Exports Drop 38% This Year, Ambition To Become Major Exporter On Hold
( 56 )အောင်မြင်မှုဆိုတာ စိတ်ဓာတ်ရေးရာကြောင့် လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
( 55 )Myanmar Preempts Power Outages During Southeast Asian Games By Preparing Generators
( 54 )မွန်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်က လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့နှင့် တပ်ခရိုင်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း တွေ့ဆံ
( 53 )Myanmar holds first ever Water Expo
( 52 )ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန် အကောင်အထည်ဖော်ရန်စိတ်ဝင်စားသည့် နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီ ၃၀ ကျော်ရှိ
( 51 )Ceasefire talks kicked off in Myanmar
( 50 )မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်လာရေး လီဆူပါတီ ကြိုးပမ်းမည်
( 49 )Myanmar development deal signed
( 48 )ထိုင်းနိုင်ငံရာက် မြန်မာ အလုပ်သမားများကို ပုံမှန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေး
( 47 )Burma School Offers Dose of Imagination
( 46 )ဖွဲ့စည်းပုံမပြင်ရင် စစ်တပ်က အခွင့်ထူးခံတစ်နေရာယူထားဦးမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
( 45 )Ethnic Alliance Voices Support for Nationwide Ceasefire Plan
( 44 )ကာတွန်းဆရာကြီး ဦးအောင်ရှိန် ကွယ်လွန်
( 43 )‘We Will Leave the Book Open’
( 42 )လိုင်ဇာညီလာခံကို ဝနဲ့ မိုင်းလားအဖွဲ့တွေ တက်မှာမဟုတ်
( 41 )Will Burma achieve peace in 2013?
( 40 )လိုင်ဇာတိုင်းရင်းသားဆွေးနွေးပွဲ သမ္မတဦးသိန်းစိန်သ၀ဏ်လွှာပို့
( 39 )Multi-ethnic conference begins in Kachin rebel HQ
( 38 )စစ်ရေးဆက်ဆံမှု အမေရိကန်အမတ် သတိပေး
( 37 )EU Offers to Send Monitors to Burma’s 2015 Election
( 36 )ကာတွန်းဦးအောင်ရှိန်ကွယ်လွန်
( 35 )Burma Takes Precautions to Avoid SEA Games Blackouts
( 34 )သံတွဲပဋိပက္ခနဲ့ဆက်နွယ်ပြီး ဖမ်းထားသူ ၁၄ ဦးအမှု စတင်
( 33 )Myanmar president meets Indian Army chief
( 32 )ထိုင်းနယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်းများမှာနေထိုင် သူ နှစ်သောင်းလျော့ကျ
( 31 )Japanese firms to join Thilawa project
( 30 )ကာတွန်းဆရာကြီး ဦးအောင်ရှိန် ကွယ်လွန်
( 29 )Burma river cruise debuts with Ayeyarwady sailing
( 28 )မြန်မာနိုင်ငံသို့ အိနိ်္ဒယစစ်ဦးစီးချုပ်နှစ်ရက်ကြာ လာရောက်လည်ပတ်မည်
( 27 )Ethnic summit could help build peace in nation: Myanmar president
( 26 )ရန်ကုန်တွင် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်မှုများ ရှိနေ
( 25 )Kachin Clashes Continue as Ethnic Leaders Meet
( 24 )တောင်ကြီး မီးပုံးပျံပြိုင်ပွဲဝင်စာရင်း နိုဝင်ဘာ၂ရက်တွင်ပိတ်မည်
( 23 )Burma Govt Approves Federal Union Party
( 22 )တိုင်းရင်းသားညီလာခံ တက်ရောက်ဖို့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၈ ဖွဲ့ လိုင်ဇာမြို့ရောက်
( 21 )Shan civilians accuse Kachin rebels of human rights abuses
( 20 )ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီ ထူထောင်ခွင့်ကျ
( 19 )On Suu Kyi’s Sandhurst Visit,aGeneral Conclusion
( 18 )သံတွဲပဋိပက္ခနဲ့ဆက်နွယ်ပြီး ဖမ်းထားသူ ၁၄ ဦးအမှု စတင်
( 17 )Myanmar gets low rating for ease of doing business
( 16 )မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးတို့၏အသံအား ကြေညာချက်ထုတ်မည်
( 15 )In Burma, Hyundai Motor Basks in ‘Korean Wave,’ Dealer Says
( 14 )ထိုင်းနယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်းများမှာနေထိုင် သူ နှစ်သောင်းလျော့ကျ
( 13 )Competition and Hesitant Investors Put Brakes on Burma’s Rice Industry
( 12 )သတ္တုတွင်းလုံခြုံရေးစရိတ် စစ်တပ်ကို ပေးနေရတဲ့ကိစ္စ လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးမည်
( 11 )No One Lives in Burma's New Multimillion Pound Capital City
( 10 )အမေရိကန် မြန်မာ စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေး သတိနှင့်တိုးမြှင့်ဖို့ HRW တိုက်တွန်း
(9)Parliament to review govt spending on security for mining projects
( 8 )ဗုံးခွဲသူ တရားခံဖမ်းမိရေးအတွက် KNU စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့
(7)Ex-Political Prisoner Win Tin Demands Apology From Junta Leaders
(6)တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်ရေး ဆွေးနွေးဖို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ စုဝေး ရောက်ရှိ
(5)Myanmar pledges to strive for peace, prosperity as it assumes ASEAN chairmanship in 2014
(4)ဒေါ်စုကို ဂုဏ်ထူးဆောင် Turin မြို့တော်သူဆုချီးမြှင့်
(3)Establishment ofaConsortium for the Development of the Thilawa SEZ
(2)လျှပ်စစ်မီတာခများ တိုးမြှင့်ကောက်ခံသွားမည်
( 1 )Myanmar to strive for peace in ASEAN region
၀န်ကြီးဌာနရုံးဟောင်းများ၏ တင်ဒါရွေးချယ်မှု ပြီးစီးသ...
ရဲတပ်ရင်း ချရန် မြေသိမ်းမည်ဆို၍ ကျောက်ဖြူ ဒေသခံမျာ...
ဒုတိယ အကြိမ် ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ် ကုန်သည်များ တွေ့ဆ...
ပြည်ခရိုင်တွင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရန် ၉၇ ရာခိုင်နှုန်...
ပြည်မြို့နယ် ဇီးအုပ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်နေအိမ် ၈၄လုံး...
လွှတ်တော်ကဆိုင်းငံ့သော်လည်း ဓာတ်ငွေ့သုံး လျှပ်စစ် ဓ...
ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်မြောက်ပိုင်းမှ ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦး...
အသေးစားနဲ့အလတ်စား စီးပွားရေး အတွက် မြန်မာနဲ့ဂျပန် ...
မြန်မာ့ စီးပွားရေး အားကောင်းရန် စဉ်းမျဉ်း၊ ဥပဒေ ပြ...
မြန်မာ-အန်္ဒိယ ကုန်သွယ်လမ်းပျက်စီးနေခြင်းကြောင့် ရေ...
သမိုင်းဝင်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ညီလာခံကို ဝနဲ့ မိုင်းလ...
တရုတ် ခရီးစဉ်အတွင်း စီမံကိန်းများကြောင့် နစ်နာချက်...
မြောက်ဦး ပုဒ်မ ၁၄၄ ရုတ်သိမ်း
နေပြည်တော် ဆီးဂိမ်းဖွင့်ပွဲ အစိုးရလျှပ်စစ်မီး မသုံ...
ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ကန်တော်ကြီးကို ရွှေတိဂုံ...
ပလောင် တပ်နှင့် အစိုးရ တပ်တို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားေ...
သိန်း (၃၀၀) တန် လက်ပတ်နာရီ ခိုးယူခဲ့သူနှစ်ဦးကို ဖ...
ပဋိပက္ခကြောင့် မြန်မာ အပြောင်းအလဲကို ထိခိုက်လို့ဆို...
လိုင်ဇာ ညီလာခံကို ‘ဝ’ နဲ့ မိုင်းလား ဘာကြောင့် မတက်...
နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းလောင်းကစားမှုဖြင့် သိမ်းထားသည့် ...
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ စစ်တပ်မှ ရခိုင် စစ်သား ကားတိုက်သေဆုံး
စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ရန် အိန္ဒိယ ကြည်းတပ် ဦးစ...
ကင်တားနား၏ လူ့အခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာမှာလက်ခံနိုင်ရန...
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ကျေးရွာ ၁၈ ရွာမှ တောင်သူများကို...
အစိုးရတပ်များ KIA တပ်ရှိရာသို့ စစ်အင်အားများ တိုးခ...
အစိုးရကို လူထုက တိုက်ရိုက် တင်မြှောက်ခွင့်ရှိအောင်...
နှစ်နှစ်ခန့် စောင့်ဆိုင်းပြီးနောက် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြ...
မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ပဲခူးနှင့် မကွေးတိုင်းတွေမှာ...
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၀ယ်ယူကုန်ကျစရိတ် ကာမိစေရန် မီတာခ တ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တုနှိုင်းမဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးလို့ ...
ဖွဲ့စည်းပုံ မပြင်ရင် စစ်တပ်က နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေ...
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ ၀င်ရောက်လာသူ ဒါဇင်နှင့်ချီပြီး ရသေ့ေ...
စင်ကာပူနှင့် မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းများ နေပြည်တော...
ဆီးဂိမ်းတွင် ထောက်လုကစားနည်းမှ ရွှေတံဆိပ်ရရှိရန် ပိ...
ထိုင်းတွင် အလုပ်ရလို၍ မြ၀တီတွင် တစ်နှစ်ကျော်နေခဲ့ရ...
လျှပ်စစ်မီတာခများ ယူနစ်အလိုက် တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည်...
ရခိုင်က ဟိုတယ် လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်းတွေကို သင်တန်းပေး...
မြို့နယ်ရဲမှူးဦးဆောင်သော မော်တော်ယာဉ် စစ်ဆေးရေးအဖ...
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကတ္တရာလမ်း ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဘီဘီစီ မှတ်ချက်အပေါ် သဘောထား ကွ...
မကွေးတိုင်း၊ မြို့နယ်နှစ်ခုတွင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရ...
ဖားအံမြို့တွင် လယ်ယာမြေ စုံစမ်းစီစစ်ရေးကော်မရှင် အ...
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် ဗုံးလန့် မှုများအပြီး မန္တလေးမြိ...
အမှန်တကယ် ဗုံးခွဲသူများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် အရေးယူဖိ...
အိန်္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်တွင် အငြင်းပွားနေသည့်ကိစ္စများ ...
KIA နှင့်အစိုးရတပ်များ တိုက်ပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေဆ...
ဖုန်းကတ်အရစ်ကျဝယ်ယူငွေများ ဆက်မသွင်းရသော်လည်း ပြင်...
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ျပားမ်ား စမတ္ကတ်အျဖစ်ျေပာင်း...
နန်းမော်ကယ် ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံတည်ဆောက်မှု ကန့်ကွက်...